Xildhibaan ka walaacsan qabsoomid la’aanta kulamada Baarlamaanka HirShabeelle – Kalfadhi
Xildhibaan ka walaacsan qabsoomid la’aanta kulamada Baarlamaanka HirShabeelle
May 2, 2019 May 2, 2019 Kalfadhi
Waxaa muddo dheer hakad ku jira kulamadii Xildhibaanada Golaha Wakiilada ee Maamulka HirShabeelle lamana oga sababta ka dambeysa qabsoomid la’aanta Fadhiyada baarlamaanka.
Waxaa jira Xildhibaano aad uga walaacsan qabsoomid la’aanta fadhiyada baarlamaanka kuwaas oo ku baaqaya in Baarlamaanka ay shaqadooda qabsadaan. Xildhibaanada HirShabeelle iyo mas’uuliyiinta kale ee Maamulkaasi ayaa intooda ugu badan waxay ku suganyihiin magaalada Muqdisho iyagoo aan heynin wax shaqo ah.
Xildhibaan Ismaaciil Nuur oo katirsan Golaha Wakiilada HirShabeelle ayaa wareysi uu siiyay Kalfadhi waxa uu ku sheegay in xilli dheer ay ka soo wareegtay fadhiyada baarlamaanka oo qabsooma waxa uuna sheegay in arintaan ay dhabar jab ku tahay shaqadii looga fadhiyay Baarlamaanka.
“Xilli aad u dheer ayaa ugu dambeysay Xildhibaanada oo kulan yeesha mana jirto wax fasax ah oo la galay ama shaqo kale oo ay ku maqan yihiin” ayuu u sheegay Kalfadhi Xildhibaan Ismaaciil Nuur.
“Waxay u muuqataa in Kalfadhigaan 5aad ee baarlamaanka HirShabeelle uu ku dhamaanayo baaqasho iyo fasax aan sharci aheyn waxaana ka digayaa in sidaan ay wax ku sii socdaan” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Xildhibaan Ismaaciil Nuur oo katirsan baarlamaanka HirShabeelle.
Sababta ugu wayn ee baaqashada kulamada baarlamaanka ayuu ku sheegay oo kaliya in ay tahay wax ay ka shaqaysay Xukuumadda Madaxweyne Maxamed Cabdi Waare oo Xildhibaanadii ka dhigtay Wasiiro kuwaas oo difaac u noqda Xukuumadda hadii ay shaqayso hadii kalaba.
“Markii Xildhibaanada 50 kamid ah Wasiiro laga dhigayay way muuqatay in sidaan ay wax noqon doonaan balse sidaan dowladnimo ma’ahan “ ayuu hadalkiisa ku soo gaba-gabeeyay Xildhibaan Ismaaciil Nuur oo katirsan Golaha Wakiilada HirShabeelle.
War-bixin – Guddigee ugu xilsaaran wakiillada Puntland arurinta xogaha la xiriira xeerarka aan hirgelin ama aan sidoodii loogu dhaqmin?